Linux ဂျာနယ်ဖတ်သူများရွေးချယ်မှုဆုပေးပွဲ ၂၀၁၁ | Linux မှ
၂၀၁၁ Linux ဂျာနယ်ဖတ်သူများရွေးချယ်မှုဆုပေးပွဲ
လေးစားပါတယ် ဒီနေ့ဆက်သွယ်မှုမှာပြproblemsနာတွေရှိနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ဘလော့ဂ်မှာလှုပ်ရှားမှုသိပ်မရှိဘူး။ ငါတို့လည်းအပြောင်းအလဲတချို့လုပ်နေပေမယ့်ငါတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုသွားကြစို့။ ငါသူတို့စာဖတ်သူများမှလုပ်ခဲ့တယ်စစ်တမ်း၏ရလဒ်များကိုငါထားခဲ့ပါ Linux ဂျာနယ်.
အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်း: Ubuntu ကို , ဒုတိယရသူ debian.
အကောင်းဆုံး Netbook / Hardware Limited ဖြန့်ဖြူးခြင်း: Ubuntu Netbok Remix, ဒုတိယရသူ အန်းဒရွိုက် Debian နဲ့ချည်ထားတယ်။
အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း operating system: အန်းဒရွိုက် မဲ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အနိုင်ရရှိသူဖြစ်သည် မေဂျာ.
အကောင်းဆုံး desktop ပတ်ဝန်းကျင်: GNOME, ဒုတိယရသူ KDE၃ ရာခိုင်နှုန်းသာကွာခြားမှုရှိပြီးတတိယနေရာတွင်ရှိသည် Xfce.
အကောင်းဆုံး web browser: Firefox ကို, ဒုတိယရသူ ခရုမ်း / ခရိုမီယမ်.
အကောင်းဆုံးအီးမေးလ်ဂလိုင်း: Thunderbird ကို, ဒုတိယရသူ: ဂျီမေးလ်ဝက်ဘ်လိုင်း.
အကောင်းဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး (IM) client: pidgin ကို, ဒုတိယရသူ Skype ကို.
အကောင်းဆုံး IRC လိုင်း pidgin ကို, ဒုတိယရသူ X-Chat.
အကောင်းဆုံး microblogging client Gwibber, ဒုတိယရသူ Choqok.
အကောင်းဆုံးရုံးသုံးအစုံ: LibreOffice, ဒုတိယရသူ ရုံးဖွင့်
အကောင်းဆုံးသီးခြားရုံးအစီအစဉ်: OpenOffice စာရေးဆရာ, ဒုတိယရသူ Abiword.
အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဗ်ဝဲ: digiKam, ဒုတိယရသူ picasa.
အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်တည်းဖြတ်ရေးကိရိယာ - GIMP, ဒုတိယရသူ Inkscapeကွဲပြားခြားနားတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုဖန်တီးသင့်တယ်ထင်တယ်၊ တစ်ခုက vector graphics editing အတွက်တစ်ခုနှင့်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤ application နှစ်ခုသည်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်ဖန်တီးထားသည်။
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ကိရိယာ - Audacity, ဒုတိယရသူ ဒေါသမီး.
အကောင်းဆုံး audio player: Amarok, ဒုတိယရသူ VLCနှစ်ခုအကြား, 7% ခြားနားချက်။ တတိယနေရာ၌ရှိ၏ Rhythmbox အရာလာမည့်တစ်နှစ်ကနေအများကြီးကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးမီဒီယာဖွင့်စက် VLC, ဒုတိယရသူ MPlayerအများကြီးအားဖြင့် VLC အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိရိယာ: Google Docsသူ၏ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည် ဝီကီ.
ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံး app: Tux သုတ်ဆေး, ဒုတိယရသူ GCompris ။
အကောင်းဆုံးဂိမ်း: goo ၏ကမ္ဘာကြီး, ဒုတိယရသူ Wesnoth များအတွက်တိုက်ပွဲ။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနိုင်ရခဲ့ဘူး အေးစက်နေတဲ့ပူဖောင်း.
အကောင်းဆုံးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာ - Nagios, ဒုတိယရသူ OpenNMS.
အကောင်းဆုံးဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်: က MySQL, ဒုတိယရသူ PostgreSQL။ MySQL သည် PostgreSQL ၏မဲနှစ်ဆရှိခဲ့သည်။
အရန်ကူးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေ - rsync, ဒုတိယရသူ ထင်းရူးဆီ.
အကောင်းဆုံး virtualization ဖြေရှင်းချက်: VirtualBox, Sun ချန်ပီယံ VMware က.
ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်: git, ဒုတိယရသူ အဖျက်သမားများ.
အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်ဘာသာစကား: Python ကို, ဒုတိယရသူ C ++ခြားနားချက်သည် ၆% ရှိသည်။
အကောင်းဆုံး scripting language: Python ကို, ဒုတိယရသူ Bash ။
အကောင်းဆုံး IDE: နေလကြတ်ခြင်း, ဒုတိယရသူ vim.
အကောင်းဆုံး CMS: WordPress, ဒုတိယရသူ ဒရူးပယ်လ်.
အကောင်းဆုံး Linux လက်တော့ပ်ထုတ်လုပ်သူ: Dell က, ဒုတိယရသူ ASUS က.
အကောင်းဆုံး Linux Desktop ထုတ်လုပ်သူ: Dell ကမရှိပြိုင်ဘက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး Linux ဆာဗာထုတ်လုပ်သူ - IBM က, ဒုတိယရသူ Dell က.
အကောင်းဆုံး Linux စာအုပ်: Ellen Siever မှ "Nutshell in Linux" အနိုင်ရသူ: Linus Torvalds နှင့် David Diamond တို့၏ "Just for Fun: မတော်တဆတော်လှန်ရေးဇာတ်လမ်း" ။
အကောင်းဆုံး Linux စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ: HTC က, ဒုတိယရသူ Samsung က။
အကောင်းဆုံး Linux Tablet Maker Samsung လိုင်းနှင့်အတူ ဂလက်ဆီ, ASUS သည်သူ၏ ASUS Transformers နှင့်အတူပြေးသမား။
အကောင်းဆုံး open source စီမံကိန်း (2010-2011 အကြားဖန်တီး) LibreOffice.
ယခုနှစ်ထုတ်ကုန်: GNOME 3.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ၂၀၁၁ Linux ဂျာနယ်ဖတ်သူများရွေးချယ်မှုဆုပေးပွဲ
အကောင်းဆုံး Netbook / Hardware Limited ဖြန့်ဖြူးခြင်း: Ubuntu Netbok Remix
အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ကိရိယာ - Audacity
နှစ်၏ကုန်ပစ္စည်း: GNOME 3
ဒါက piss နှင့်မကျဆင်းရန်ဖြစ်ပါသည်
ဒီရလဒ်တွေကို Linux Journal အသုံးပြုသူများရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ အဖြစ်မှန်နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ကောင်းပြီဆိုရင် Linux Journal အသုံးပြုသူများသည်မသိဘဲဖြစ်နေသည်
ငါထင်တာကတော့မသိတာမဟုတ်ဘူး။ Linux သုံးစွဲသူအများစု Ubuntu နဲ့စတာဆိုတာမမေ့သင့်ဘူး။ ၎င်းသည် install လုပ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အလွယ်ကူဆုံး၊ များစွာသောသောင်းနှင့်ချီသောအထုပ်များအပြင် PPAs တစ်ခုချင်းစီမှထုတ်လွှင့်သည် application အသစ်၊ အရာအားလုံးကို double click ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ သုံးစွဲသူများသည် OS ကိုပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများမှာသိလိုစိတ်ပြင်းပြသူများမဟုတ်ကြပါ။ များစွာသောကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိသူများဖြစ်သောကြောင့်ကိုက်ညီသူများလည်းရှိသည်။ အချို့ကအပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်၍ Ubuntu ကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသည် (အရသာတွေအကြောင်းရေးထားတာဘာမှမရှိဘူး) ။ မင်းတို့အားလုံးသတိရရမှာကငါတို့အားလုံးနီးပါးဟာအမည်မသိသူမှလာတာမဟုတ်ဘဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အတွက်အများကြီးကုန်ကျတယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ ခဏလောက်ပဲငါတို့အားလုံးအတူတူပင်အရသာရှိလျှင်ဤကမ္ဘာမှမည်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။
ငါ openuse နဲ့စတင်ပြီး yast နဲ့ပြိုကွဲသွားတယ်၊ ပူစီနံမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးအဲဒီမှာပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေ့ရက်များစွာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့အများစုဟာသင်တို့သိကြပေမယ့်သင်နောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုကိုစမ်းသုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ။ ကမ္ဘာကြီးသည်တူညီသောအရသာနှင့်အတူမည်သို့ရှိမည်နည်း ... trolls များမတည်ရှိတော့ပါ။ ပျင်းစရာကောင်းလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ၊ လူ၊ အကယ်၍ အရသာကောင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောလျှင်အသုံးပြုသော distros များသည်ကောင်းလိမ့်မည်။ စနစ်များလည်း reggaeton မတည်ရှိပါ။ Justin Bieber သည်အမြီးကိုမစားနိုင်၊ အဒေါ်မျိုးဆက်အားလုံးကောင်းလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး Gwibber microblogging client !! Hotot သို့မဟုတ် Polly တို့ကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများသည်အဆတစ်ရာပိုကောင်းပါက ထိုစစ်တမ်းကိုဖြေကြားသူများသည် Ubuntu အသုံးပြုသူများဖြစ်သော်လည်း Gwibber ဖြစ်သည်။ Ubuntu ကိုအရင်ဆုံးငါလုပ်ခဲ့တုန်းက uninstall လုပ်တယ်။
အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကား: Python, Runner-up C ++, ခြားနားချက်သည် ၆% ရှိသည်။ (မှတ်ချက်မရှိ)
အကောင်းဆုံး Ubuntu Distro?
ငါ Arch နှင့် OpenSuse အတွက်မဲပေးကြသည်။
ငါ Blender ပျောက်နေသည်။
နှင့် Dell OMG ။ Toshiba ဘယ်အချိန်မှာငါတို့ဘက်မှာရှိမလဲ ??? ဘယ်တော့လဲ?
၎င်းတို့သည်စစ်တမ်းရလဒ်များသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် debian ကိုပထမနေရာထားသည့်ဆာဗာများအကြောင်းဆောင်းပါးနှင့်ဆင်တူသော်လည်းဂရပ်တွင်စင်စင်အောက်အောက်၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရသည်။
Marlin: Nautilus အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခု
GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှု၏ ID ကဒ်များ